Amathiphu Wezithombe ze-3D - Ungazidubula Kanjani Izithombe Zika-3D ezihamba Phambili - uLucidPix
Amathiphu wezithombe ze-3D
Ungashutha Kanjani Izithombe ezihamba phambili ze-3D
Ngaphambi kokuthi uhambe uzenzele amakhono akho, nazi izeluleko ezimbalwa ze-3D zezithombe ezizokusiza ukuthi wenze izithombe ezinhle kakhulu ze-3D.
Eqa esigabeni: Sondela • Ungayenzi i-AI • I-Photograph Mound • Gwema Izinguquko Zokukhulu Ngokuphazima kweso • Khetha Isihloko • Adubule ngokuvundlile • Zama Izilungiselelo Zokwabelana Ezihlukile • Ngeza Izihlungi • Sebenzisa Ukubheka • Zama Okusha • Faka Umbhalo we-3D • Landa i-LucidPix
Lezi zeluleko zisebenza kunoma yisiphi isithombe se-3D
(Simane sitshela le ndaba ngezimbali ngoba, kahle, kungani kungenjalo?)
Ithiphu # 1: Sondelana Nesihloko
Njengoba kukhonjisiwe kuvidiyo engenhla, yenziwe ngeLucidPix, ungabona ukuthi ukusondelana, cishe isibhamu esiseduze kakhulu kungahle kube nomphumela wezithombe ezinhle ze-3D. Lezi zithombe ezinamaphini aqine kakhulu, zingangeza ngempela kulokho kokubukwa.
Ukuze uthole imiphumela yokubuka enhle kakhulu, ungazama ukuthatha isithombe kanye nefoni yakho imodi yesithombe, okumele isize ukufiphalisa ingemuva ngenkathi igcina isihloko sigxile kakhulu.
Ngenye indlela, ungakhipha i-DSLR yakho ngelensi esheshayo nokuvula okukhulu ukudala i-bokeh ejabulisayo ngendlela yemvelo. Le bokeh eqinile, noma ukufiphala kwengemuva, kuzovumela isihloko sesithombe ukuba sihambele ngokuzimele ingemuva, sithuthukise umphumela we-3D.
Ithiphu # 2: Ungakhohlisi Ngengozi I-3D Photo AI
Kungakanani Esingathanda Ukuthi Siphelele, Asifanele
Kwesinye isikhathi i-Artificial Intelligence equkethwe ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza zokuguqula ze-3D ayiqondi kahle ukuthi ibheke ini. Kule vidiyo engenhla, uyabona ukuthi i-AI yayididekile yi-anther yezimbali ekugcineni kwesiqu. I-AI ayizange ibone ukuthi ixhunyiwe, okwenza leyo bend ebukhali oyibona kuvidiyo ye-3D engenhla.
Imiphumela efanayo ingahle ibonakale lapho kuguqulwa izithombe ezinemigqa eminingi emincane, eqondile, efana nezisekelezo kubhuloho, isiqu esincanyana simbali, amagatsha esihlahla angenalutho, noma uthango lwensimbi.
Sisebenza kanzima sithuthukisa lezi zindawo, hlala ubukele eminye imininingwane mayelana nokubuyekezwa okuzayo kweLucidPix 3D okuzayo.
Ithiphu # 3: Izinto Zokulimaza Izithombe
Ukujula kancane kancane okuhambisana nezimbali ezigqamile noma ezinye izinto ezifana nomumo kufana ukudala ukudala ukuguqulwa kwesithombe okuhle kwe-3D. (“Ngokujula” sisho ukuthi amabanga ahlukene wesigameko avela kukhamera.) Lezi zinguquko ezibushelelezi ebangeni zingenza umbukiso we-3D ojabulisa ngokwengeziwe. Kuyasiza nokuthi lezi zinhlobo zezigcawu azidingi uhlelo lokusebenza ukuthatha ukuqagela okungaqondakali kokungemuva kwezinto.
Izimila Ezigugayo Zibukeka Zikhulu ku-3D
I-Coleus kule vidiyo engenhla iguqulwe kahle yaba yi-3D, ukuvumela ukuthi uzizwe sengathi ubona isitshalo ngamehlo akho. ushintsho oluhamba kancane kancane kusuka kusihloko sesithombe kuya kokukuhlaza okukude okungemuva luthuthukisa umphumela we-3D.
Icebiso # 4: Ungabambi Izinguquko Ezishaqisayo Ekujuleni Kwe-3D
Izinguquko ezingaphenduki ekujuleni zivame ukuholela ezithombeni ezi-3D ezingezinhle. (Khumbula, "ukujula" yizindawo ezihlukile zesigameko ezivela kukhamera.) Lokhu kungumphumela oseceleni wokuthi ukujula kwe-3D kuboniswa kanjani ku Isithombe se-Facebook 3D noma uhlelo lokusebenza lwezithombe ze-3D njengeLucidPix.
Uma ubuka izithombe ze-3D, izinto ezisekuqaleni zivame ukuhamba kakhulu kunezinto ezingemuva. Ngenxa yalesi sizathu, izinguquko ezincane ekujuleni kwesihloko sesithombe nesemuva zivame ukwenza isithombe esingcono se-3D.
Kuze kube yilapho lezi zinguquko sezinzima lapho izinkinga ziqala ukuvela. Kwesinye isikhathi umphumela we-3D uyancipha lapho uhlelo lobuhlakani bokufakelwa kumele luqagele futhi ludwebe okuyizinto ezingemuva kwezinto ngaphambili.
Zama Ungenzi i-AI Guess Yini Ebangela Into
Lapho uhlelo olunquma ukujula kwesithombe “ukuqagela” kulokho okubangela into esithombeni, kwesinye isikhathi luphuthelwe. Kuvidiyo engenhla, ungabona ukuthi ama-AI awenzanga umsebenzi omuhle wokuqagela kulokho okufihlwe imbali yeZinnia. Ukugwema izinguquko ezijule ngokushesha kunganciphisa lezi zinkinga.
Sisebenza kanzima sithuthukisa lezi ziqageli, hlala ubukele eminye imininingwane mayelana nokubuyekezwa okuzayo kweLucidPix 3D okuzayo.
Icebo # 5: Khetha Isihloko Esithombeni Sakho
Nayi ithiphu yesithombe esihle ye-3D: Izithombe zivame ukubukeka kahle kakhulu uma kunendaba ecacile iso lakho elingadonselwa kuyo. Abathwebuli bezithombe be-Pro bashiya okuncane ekuchazeni. Esikhundleni salokho, benza ababukeli babone lokho umthwebuli wezithombe afuna ukuba bakubone ngokwakha ngokucophelela isifundo.
Thatha, isibonelo, ividiyo ye-3D engezansi. Lapha, asikho isihloko esicacile. Konke okubonayo yisitshalo esikhulu seConeflower. Awazi ukuthi ulibekaphi iso lakho, likushiye ufuna okuningi esithombeni.
Qiniseka ukuthi ukhetha Isihloko
Ithiphu # 6: Kwangakwesinye, ungasidubuli isithombe sakho ngakwesokudla
Ngokungafani namavidiyo amaningi, izithombe ze-3D zenzelwe ukuthokozelwa ku-smartphone yakho. Nayi ithiphu yesithombe se-3D; Ngaphandle kokuthi unesizathu esihle ngempela sokungakwenzi, kufanele uhlale uthwebula izithombe zakho zibheke phezulu, noma isitayela se-portrait, kunokuba uvundle / ukwakheka kwezwe. Ngale ndlela uyakwazi ukugcwalisa kangcono isikrini sefoni yakho ngesithombe se-3D osanda kusenza.
Dubula kuModi Eqondile
Ithiphu # 7: Zama Izilungiselelo Ezihlukene Zokwabelana Ku-LucidPix
Kuzo zonke lezi zeluleko ze-3D zezithombe, lena kungenzeka ukuthi ebaluleke kakhulu. Manje njengoba usudale isithombe esihle se-3D, sekuyisikhathi sokusaba nabangani bakho nomndeni wakho. Indlela enhle yokwabelana ngayo ingaphakathi kweLucidPix, okuqinisekisa ukuthi ababukeli bakho babona isithombe esihle kunazo zonke, esisebenzisana kakhulu se-3D. I-Facebook inakho nokwabelana ngesithombe esihle se-3D ezizokhombisa izithombe ze-3D ezenziwe kuLucidPix.
Ukwabelana ngendalo yakho ye-3D ngaphandle kweLucidPix ne-Facebook kudinga ukuthi uthumele ngaphandle njenge-looping animated GIF or Ividiyo ye-MP4. Uhlobo ngalunye lwefayela luzokwakha ividiyo emfushane ebonisa isithombe se-3D osenzile. I-LucidPix njengamanje inikezela ukunyakaza okungamakhamera ayi-4 ongakukhetha lapho uthumela ngaphandle: i-Orbit, Zoom, Slide, ne-Square.
Ukuhlelwa Kwangaphandle: Orbit
Imodi ye-Orbit Export
Ukulungiswa kwe-Orbit kushukumisa ikhamera ezungeza isiyingi, kubonisa zonke izinhlangothi zezimbali zakho ze-3D. Lokhu kaningi kuyindlela enhle, njengoba kulingisa ukuthi sithambekele kanjani ukuhambisa izingcingo zethu lapho sixhumana nesithombe se-3D.
Ukuhlelwa Kwangaphandle: Sondeza
Isilungiselelo sokuthumela se-Zoom singenye yalezo zimo zokushaya noma zokuphutha. Uma uthola isithombe esisebenza ngale ndlela yokuthumela ngaphandle, kwesinye isikhathi kubukeka kumangalisa ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi, uma isithombe singabukeki sihle, imvama sifinyelele ngokudlule KULUNGILE, ngqo kuya kokubi.
Sondeza Imodi Yokukhipha
Ngaphezulu, ungabona ukuthi, ubukhulu becala, ukuthunyelwa kwe-Zoom kwalezi zimbali zeLily kubukeka kukuhle. Ngeshwa, ungabona ukuthi i-AI ididekile kancane phansi ngakwesobunxele eluhlaza okwesibhakabhaka kanye nephondo eliphakathi eli-pink / peach.
Ukuhlelwa Kwangaphandle: Isilayidi
Isilungiselelo sokuthekelisa ama-Slide kungenye intandokazi. Kuyafana ne-3D yendabuko i-wigglegraph, kodwa okungcono! Esikhundleni salokho ngeqa ngokushesha kusuka ekubukeni kwesobunxele kuye ekubukeni kwesokudla ngakwesokudla, isilayidi sisebenzisa ubuhlakani bethu obukhexekile bokwakha ukuhamba okuhle phakathi kwalezi zinhlangothi ezimbili eziphelele.
Imodi Yokuthekelisa Yamaslayidi
Qaphela lapho uthumela ngenketho yeSlide uma kunemigqa eminingi kusithombe sakho se-3D. Lapho ikhamera isuka ngapha nangapha, imigqa eqondile efana nesiqu esingenhla ingathola ukugoba, okubukeka sengathi kukude. Kulesi simo, ukugoba kuncane ngokwanele ukuthi akuyona imali enkulu, kodwa kufanelekile ukukhumbula.
Ukuhlelwa Kwangaphandle: Isikwele
Isilungiselelo sokukhipha kwesikwele siyefana nesilungiselelo se-Orbit, ngaphandle kokuthi sihamba ngendlela eya ngewashi futhi sakha "ekhoneni elibukhali" lapho sizungeza isithombe. Lokhu kulungiselelwa kukunikeza ngempela amandla okubheka isithombe nxazonke izinhlangothi ezinhlanu.
I-3D Photo Tip # 8: Faka Izihlungi
Kwesinye isikhathi uMama weMvelo udinga usizo oluncane. Mhlawumbe ukukhanya bekungalungile noma imibala esesibukweni nje musa ukwenza izimbali. NgeLucidPix, ungathuthukisa ukubukeka kwesithombe sakho se-3D ngezihlungi zesithombe se-Instagram-style.
Ngeza izihlungi zokuthuthukisa isithombe sakho se-3D
Lapha, ungabona ukuthi isithombe sokuqala sasibukeka kahle futhi siguqulwa sibe yi-3D kahle, kepha imibala ethathwe yikhamera yayinqotshwe kakhulu. Emhlabeni wangempela, imbali yayigcwele kakhulu futhi imibalabala. Ukuze silungise le nkinga, sengeze okokuhlunga esithombeni, sakwenza kubukeke sengathi senze lesi sithombe se-3D sembali ngosuku olukhanyayo nelanga.
Ithiphu # 9: Sebenzisa umbono wemvelo
Through the ukusetshenziswa kombono, ungathuthukisa ngempela izithombe zakho ze-3D. Ukuthola nokuthwebula izithombe zensimu ezihlehla ziye endaweni eyodwa kubonisa ngempela imvelo ye-3D yeLucidPix.
Amanye amathuba wokuqina kwesithombe aqinile afaka izithombe zasemgwaqweni futhi canyons eziqinile. Ngokuzayo lapho ubona indlela ende, eqondile, phuma ifoni yakho uyithathele umhlaba ngeLucidPix!
Icebiso # 10: Ungenzi okufanayo
Kaningi siphindela emuva kwabazamile nabaqinisile. Siyazi ukuthi kubukeka kahle isikhathi esiningi, futhi kulula kunokuzama into entsha. Ngokuzayo lapho uthatha izithombe, siphakamisa ukuthi uthathe isikhathi esengeziwe ukubona ukuthi ifreyimu yakho ngendlela entsha ingenza kanjani umehluko.
Thatha, ngokwesibonelo, lesi sithombe samatamatisi aluhlaza. Ngokufika phansi ezingeni labo, futhi eduze ngokwanele ukubenza bagcwalise iningi lohlaka, ungawandisa impela umphumela we-3D.
Ithiphu # 11: Faka umbhalo we-3D esithombeni sakho
I-LucidPix yenza okungaphezu kokwenza izithombe ze-3D, futhi iyazihlela. Ungangeza noma imuphi umbhalo owufunayo kwindalo yakho ye-3D, uwenze ngendlela oyifisayo ngokushintsha isitayela sefonti nombala wombhalo.
Ngomkhuba omncane kanye namathiphu wesithombe se-3D asohlwini olungenhla, uzobe wenza izithombe ezimangalisayo ze-3D ngeLucidPix ngokushesha! Ungakhohlwa ukwaba izinto zakho Umphakathi weLucidPix. Asikwazi ukulinda ukubona ukuthi udala ini!
I-Dos and Don'ts of Reflective 3D Photography →← Indlela Ehamba Phambili Yokubamba Amapaki Kazwelonke